फर्केर हेर्दा वि. स. २०७७ साल ; यस्ता भए देशका महत्वपूर्ण घ’टना र उपलब्धीहरु : – Sadhaiko Khabar
फर्केर हेर्दा वि. स. २०७७ साल ; यस्ता भए देशका महत्वपूर्ण घ’टना र उपलब्धीहरु :
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०१, २०७८ समय: ७:५३:१७
आज वैशाख १ गते, अर्थात्, विसं २०७८ सालको पहिलो दिन । आज २०७८ साल नयाँ वर्ष बनेर उदाएको छ । भित्तेपात्रोको पाता फर्किएको छ । नयाँ वर्ष हरेक वर्ष आउँछ । वर्षहरू आउँछन् र जान्छन् पनि । समयले धेरै सिकाएको छ । समय कोही कसैले रो’केर पनि रोकिँदैन, छे’केर पनि छेकिँदैन । यो निरन्तर अगाडि बढ्छ । यस्तै निरन्तरताको क्रममा २०७७ साल २०७८ मा परिणत भएको हो ।
फर्केर हेर्दा, २०७७ सालमा निकै परिवर्तन भएका छन् । नेपालका लागि आफैँमा केही सन्देश बोकेको वर्षका रुपमा रहेको छ । कोरो’ना कह’रका कारण उत्पन्न भएका स्वास्थ्य जो’खिम, मानवीय सङ्क’ट तथा अन्यो’लताका बीचमा गुर्ज’नुपर्यो, यस वर्ष ।
विसं २०७६ चैत ११ गतेदेखि को’रोना भाइ’रसको निय’न्त्रणका लागि गरिएको लक’डाउनका बीच शुरु भएको २०७७ ले नेपालीलाई विप’द्सँग ल’ड्न भि’ड्न सकिन्छ भन्ने राम्ररी सिकाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र त्यसमा लगानी बढाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । सरकारले सोही आवश्यकतालाई महसुस गर्दै एकै पटक देशभर गत मङ्सिर १५ गते ३१५ अस्प’ताल भवनको शिलान्यास ग¥यो ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सरकारको यो सत्प्रयास यस वर्षको महत्वपूर्ण कामको रुपमा स्थापित भएको छ । सरकारले सो कार्यका लागि मात्रै रु ५८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६४९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्प’ताल नभएको सन्दर्भमा न्यूनतम पाँच श्ययादेखि अधिकतम १५ श्यया बराबरको अस्प’ताल निर्माण गर्न लागिएको हो ।
मुलुकभरका सबै स्थानीय निकायमा अस्प’ताल निर्माणपछि नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन् । यसै चर्चा शुरु भएको झण्डै ४० वर्षपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना करिब सम्पन्न भएको छ । राजधानीवासीलाई सहजरुपमा खानेपानीको सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको सो आयोजना यही चैत २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्नुभयो ।
को’रोना कह’रले विकास निर्माणको कामलाई खास अर्थमा प्रभावित पारेको भए पनि सरकारको सुझबुझका कारण यस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्वाङका अनुसार हरेक दिन सङ्घीय सरकारले ६.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिरहेको छ ।
विकास निर्माणका केही सकारात्मक काम भए पनि यस वर्ष मुलुकको राजनीति भने विवा’दको केन्द्रमा रह्यो । झण्डै दुई तिहाइ जनमत प्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा वि’वाद चर्कि’यो । सोही वि’वाद बढ्दै जाँदा नयाँ जनादेशका लागि प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघ’टनको सिफारिस गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा लामो ब’हस र छलफलपछि गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भयो । सरकारले सर्वोच्च अदा’लतको फैस’लालाई आत्मसात् गर्दै गत फागुन २३ गते पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइयो ।
तीन वर्ष पहिले एकीकृत भएका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सर्वोच्च अदा’लतको फागुन २३ गतेको फैसलाले ब्यूँताइदियो । नेकपाको नामसम्बन्धी वि’वादमा परेको रि’टको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतालाई मान्यता दिएन । एकीकरण गर्ने पुनः आउन आ’देश दियो । सो फैसलालगत्तै नेकपाको आधिकारिक नाम ऋषि कट्टेलले पाउनुभयो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै गत फागुन २५ गते निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै दलको मान्यता दियो ।
यस्तै, सरकारले गत माघ १४ गतेदेखि नेपालमा कोरो’नाविरुद्धको खोप अभियान शुरु ग¥यो । कोरो’नाको खोप आयातका लागि सरकारले रु ४८ अर्ब बराबरको स्रोतको व्यवस्था गरेको छ । सबै नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क खोप दिने बताएको छ । कोरो’नाका कारण झण्डै तीन हजार नेपालीको ज्या’न ग’यो भने दुई लाख ८० हजार ९८४ सङ्क्र’मित भए । भारत सरकारको १० लाख डोज कोरो’नाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएपछि खोप अभियान शुरु भयो ।
त्यस्तै, सरकारले भारतसँग १० लाख डोज खोप खरिद ग¥यो भने चीनले आठ लाख डोज उपलब्ध गराएको छ । को’रोना निय’न्त्रणका लागि सरकारले विभिन्नरुपमा लक’डाउन गर्दा अर्थतन्त्र धरा’शायी बन्न पुग्यो । आर्थिक गतिविधि रो’किँदा बेरोजगारी र गरिबीसमेत बढेको छ । पछिल्ला दिनमा प्राथमिकताका आधारमा खोप अभियान शुरु गरिएका कारण केही राहत भए पनि पुनः कोरो’नाको दोस्रो लहर शुरु भएको छ । यसले आममानिसलाई पुनः भ’य उत्पन्न भएको छ ।
यसै वर्ष सरकारले भूमि’गत गतिविधि गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको छ । गत फागुन २० गते सरकार र चन्द समूहबीच तीनबुँदे सहमति भयो । सोही सहमतिका आधारमा फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री ओली र चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरी एउटै मञ्चबाट सम्बोधन गर्नुभयो । उक्त सहमति नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण घट’नाको रुपमा दर्ज भएको छ ।
यस्तै, २०७७ को असार १३ गते अफ्रिकाबाट भारत हुँदै नेपाल छिरेको सलह किराले अन्नबालीमा क्ष’ति पु¥यायो भने बाढीपहिरोका कारणबाट जन’धनको समेत क्ष’ति भयो । यसै वर्ष देशको सबैभन्दा ठूलो ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भयो भने दोस्रो ठूलो २२० केभी क्षमताको दाना कुश्मा सवस्टशेनसमेत सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही चैत ९ र १० गते बङ्गलादेशको भ्रमण गर्नुभयो । भ्रमणका क्रममा नेपाल र बङ्गलादेशबीच चारबुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । चैत १३ गते नेपाल पशुपंक्षीजन्य उतपादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा भएको छ । कोरो’नाका कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने यस वर्ष सम्पन्न हुन सकेनन् । माथिल्लो तामाकोशी निर्माणको अन्ति’म चरणमा छ ।
यस्तै, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि कोरो’नाका कारण प्रभावित भयो । राजनीतिकरूपमा हेर्दा यस वर्ष राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच एकता भई समाजवादी पार्टी स्थापना भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संस्थापक नेता सूर्यबहादुर थापाका छोरा एवं नेता सुनिल थापा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्नुभयो । विभा’जनको झण्डै दुई वर्षपछि गत मङ्सिर २४ गते विवेकशील र साझा पार्टी एकीकृत भए ।
कोरो’नाका कारण अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र सम’स्यामा परेको भए पनि धितोपत्र बजार यस वर्ष उत्साहप्रद रह्यो । कूल बजार पूँजीकरण झण्डै रु २१ खर्ब ५८ अर्ब ७७ करोड ८४ लाख ३० हजारले बढेको छ । बजार उकालो लाग्दै जाँदा पूँजीकरण आज रु ३७ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड ५७ लाख बराबर पुगेको छ ।